Waxka Ogow Amarrada la dul-dhigay RW Rooble intii uu socday Kulankii Habar Khadiijo - Awdinle Online
Waxka Ogow Amarrada la dul-dhigay RW Rooble intii uu socday Kulankii Habar Khadiijo
faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa kulamo Xasaasi ah oo kadhacey Xarunta Habar-khadiija oo fariisin u ah Hay’ada NISA, kulankaasi oo u dhaxeeyey Raiisul Wasaaraha cusub ee dalka Eng. Rooble iyo Teliska ugu sareeya Hay’ada NISA.
Xog hoose oo aan halney ayaa tilmaameysa in Ra’iisul Wasaaraha Xubnihii lasocodey oo ay kamid ahaayeen Xogheenadiisa gaarka ah iyo lataliyaashiisa laga reebey in kulanka Qeyb ka noqodaan waxaana la sheegey in kulanka dibad joog ka ahaayeen gebi ahaanba.
Saraakiil katirsan sirdoonka Soomaaliya oo magacooda qariyey ayaa laga soo xigtey in kulanka uu ahaa mid labo geesood ah oo dhaxeeyey Raiisul wasaare Rooble iyo Teliyaha Nabad Suggida hereerihiisu fadhiyeen Teliyaha hogaanka Dabagalka, Xogahaya gaarka ah ee Fahad Yasin, Madaxa Technology-da, Hogaanka Dibada NISA iyo Cabdulahi Kulane ay kuxigeen u ah fahad Yaasin.
Kulanka ayaa daarnaa sidii Raiisul wasaaraha ula jaanqaadi lahaa arimaha siyaasada ee isaga ka horeeyey isla markaana ula socodsiin lahaa NISA talaabo kasta kahor inta uusan qaadin.
Teliyaha Nabad sugida ayaa la sheegey in uu sharaxaad kooban siiyey RW Rooble isagoo hadalka ku wareejiyey Teliyaha Hogaanka Dabagalka Siyaasiyiinta oo ah nin ay saaxiibo dhow yihiin Fahad yaasiin.
ilo xog ogaal ah ayaa sheegey in Teliyaha Dabagalku faahfaahiyey ujeedada kulanka ay u fadhiyaan wuxuuna u dhiibey file ay ku qornaayeen heshiis sir ah oo NISA ay lagashey Kooxda Alshabaab kaas RW loo ogolaadey in uu wax ka ogaado kadibna laga celiyey markuu akhristey.
Isfahamkan ayaa lasheegey in Hogaanka Sare ee NISA la galeen Kooxda alshabaab Bishii Ramadaan ee Tagtey, kaas oo ah in lshabaab ay joojiyaan qaraxyada magaalada Muqdisho, taa bedelkeedna lacag lasiiyo alshabaab 3dii bilba mar, waxaana lasheegey in uu fududeeyo Heshiiskan Teliyaha Dabagalka oo Hore ugu tirsanaan jirey kooxda Alshabaab.
Eng. Rooble Raiisul wasaaraha cusub ayaa su’aalo ka keeney Arimaha qaar hase ahaatee waxaa durba hadalo kul kulul kala horyimid Teliyaha Dabagalka isagoona kula kaftamey hadalo u muuqdey handadaad waxaana durba hadalka loo bedeley kaftan sida goobjoogayaalku noo sheegeen.
Teliyaha Dabagalka ayaa kulanka ka dhex sheegey in sanadkaan siyaasiyiin badan ay is hayaan, shaqo badan utaalo, balse Raiisul wasaaraha laga rabo in uu dhiso MD Farmaajo wixii kalana isaga dhameystiri doona, wuxuuna carabka ku dhuftey siyaabaha uu ula tacaali doono Siyaasiyiinta ka hortimaada qorshaha socda.
Hadalkaan ayaa muujinaya qorshayaasha halista ah ee laga yaabo in Teliyaha Hogaanka Dabagalku ku dhaqaaqo.
Previous articleKenya oo digniin & hanjabaad u dirtay dowladda Soomaaliya
Next articleMeydka marxuum Cali Khaliif oo laga soo dejiyay Muqdisho